Max Myanmar Holding နှင့် Win Thin Academy တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် IFRS Training သင်တန်းဆင်းပွဲ
International Financial Reporting System ကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ Win Thin Academy နှင့် ပူးပေါင်း ပို့ချပေးမည့် IFRS Training ဖွင့်လှစ်
Max Myanmar Group of Companies နှင့် AYA Financial Group ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Martin Tlapa နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Doleček တို့အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ(၄)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီများ အုပ်စုတွင် Internship ဆင်းကြမည့် MBA ကျောင်းသား/သူများကို Group CEO ဒေါက်တာသောင်းဟန်က ကြိုဆိုသြဝါဒစကား ပြောကြား
Max Myanmar Group of Companies Management Meeting
Group CEO ဖြစ်သူ ဒေါက်တာသောင်းဟန်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီအုပ်စုနှင့် လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော Toyota Tsusho Corporation ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် TTK Logistics (Thailand) သို့ သွားရောက်
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကူညီလှူဒါန်းမှုများတွင် ပါဝင်ရန် Novotel Yangon Max Hotelနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ စုပေါင်း ပေးအပ်လှူဒါန်း
Max Myanmar Group နှင့် AYA Financial Group မိသားစုတို့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ နှင့် တရားအလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲပဲ့ကျမှုကြောင့် ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသည့် ပြည်သူများထံသို့ စားသောက်ကုန်များ သွားရောက်ကူညီ